UKobo Aura uphononongo olunye. Iimpawu, ukusebenza, izibonelelo | Zonke iReaders
UKobo Aura Uvavanyo olunye
Lo UKobo Aura Uvavanyo olunye Ikwayindlela yokuqala endazama ngayo. Ndandijonge phambili kuyo ngomdla omkhulu nolindelo kwaye oko kwandikhathaza kuba xa ulindele lukhulu entweni ugqibela uziphoxa. Kodwa kufuneka nditsho ukuba andizange ndidaniswe.
Kudala ndimvavanya umfundi kangangeenyanga ezininzi. Kwaye ndiyonwabele kakhulu. Ngokukhawuleza ukuba uyifumane Into yokuqala eyandichukumisayo bubungakanani bayo. Kukhulu. Ndingathi inkulu kakhulu. Abo bafuna i-ereader enkulu baya kuyithanda. Ezo 7,8 ″ zihamba umgama omde. Ingakumbi xa uqhele u-6 ″
Ekugqibeleni ndiyazama uphawu kwinqanaba elifanayo nohlobo. Masihambe neempawu kwaye emva koko ndiza kukuxelela ngakumbi. Kwaye ukuba ufuna ukuyithenga jonga apha
Ekupheleni kohlalutyo kukho igalari yezithombe zeKobo Aura One
5 Umdibaniso nePokotho
6 Uvavanyo lokumelana namanzi
8 IKobo Aura Ifoto enye yegalari
7,8, touch screen
Isigqibo: iiphikseli ezingama-872 x 1404 (H x V) / 300 dpi
Ikhanyisiwe. Inkqubo yeComfortLight Pro
I-Wi-Fi 802,11 b / g / n kunye ne-USB-encinci
Ukuzimela: ukuya kuthi ga kwiiveki ezi-4
Ukumelana namanzi kwimizuzu engama-60 kwiimitha ezi-2 ubunzulu be-IP8X
Uncedisa iincwadi ezinomxholo okhuselweyo we-Adobe DRM
Ifika kwibhokisi engqindilili kunye nokuvula icala. Isuswe ngokungathi ziibhokisi eziqulathe ingqokelela yeencwadi. Kulunge kakhulu kwaye kulula ukuphatha.
Ngaphakathi sinebhokisi engqongqo entle kakhulu enokuvula kwangaphambili, njengaleyo yexesha lokuphila. Ngaphambi kokuyivula, besele siqikelele ukuba okungaphakathi kuya kuba kukhulu.
Ngamafutshane, ukupakishwa kunye nokunikezelwa kwayo kusonjululwe kakuhle.
Njengoko ndibonisa kulo lonke uhlalutyo, sisixhobo esikhulu, zii-intshi ze-7,8, kunzima ukubamba ngesandla esinye. Ayinayo iphaneli esecaleni yokujika kwephepha, yonke into iyabambeka, kodwa kulungelelwaniso singachaza imimandla eyahlukeneyo yokwenza imenyu kunye nokujika kwephepha. Iqhosha ekuphela kwalo liqhosha lamandla ngasemva.
Yintoni i-ISBN kwaye yenzelwe ntoni?
I-chassis yenziwe ngeplastikhi, ibambelele ngasemva ukuba ngokoluvo lwam iyenza ibe nomtsalane kakhulu. Ubambe kakuhle kwaye akatyibiliki esandleni.
Xa ndisithi inkulu, ndithetha ukuba inkulu. Apha ungabona ifoto kunye ne-7 ″ Kindle Oasis. Apha ungabona kunye kunye nezacholo zeKobo kunye neAmazon Kindle
Olunye uthelekiso lukunye ne-6 ″ Kobo Clara, ubungakanani esibuqhelileyo kwaye ekuya kuba lula kuthi ukuthelekisa.
Izibane zilungile kakhulu nangona isikrini esikhulu kangako. Iza neComofortLight Pro ukunciphisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka
Singakhetha ukuKhanya kunye nokukhanya kwendalo ngokuzenzekelayo. Ukukhanya sebenzisa isivamvo sokukhanya. Ngokukhanya kwendalo kubeka umbala wokukhanya kuluhlu ukusuka kwikhandlela leorenji ebusuku ukuya elangeni emhlophe ecacileyo emini.
Kulula kakhulu kwaye kulula ukuhamba kwiimenyu kwaye utshintshe iimpawu ezahlukeneyo zesidlali. Nokuba ungazange uthinte i-Kobo, uyiqhela kwangoko kwaye uyayixabisa inkqubo eqinileyo nezinzileyo.
Ndiyayithanda indibaniselwano yePokotho. Wongeza naliphi na inqaku olifumana kwiwebhu kwaye ufuna ukulifunda ePokothweni kwaye xa ungqamanisa unganazo kwi-ereader yakho. Ilula kakhulu kuba ukongeza epokothweni kukucofa iqhosha kwisikhangeli okanye ukuba wabelane ngefowuni kwaye ukhethe le nkonzo.
Inye kuphela kodwa ndibeka kukuba iPokotho isetyenziselwa ukugcina ulwazi oluninzi olumakishi kwaye azisoloko zizinto ofuna ukuzifunda. Amaxesha amaninzi sigcina izixhobo, iiwebhusayithi, ividiyo okanye umfanekiso kunye Andiboni ndawo yokuvumelanisa yonke into. Kuya kufuneka usivumele sikhethe iithegi zokuzivumelanisa. Kudala ndiyikhangela kodwa khange ndikwazi ukuyifumana le ndlela.
Ukucinga ngendlela yokuyivala le nto, ndinokucinga kuphela ngokuba neeakhawunti ezimbini zePokotho, ezokuqala kunye nezesekondari, usebenzisa ezona zinto ziphambili kuyo yonke into kwaye xa u ingangoyena ungqamanisa ne Kobo. Yi «botch» kwaye ndiyathembisa ukuyicacisa kwisifundo somzuzu esamkela ukuba ungqamanisa yonke into. Iingxaki ziphantsi kakhulu kunezibonelelo.
Uvavanyo lokumelana namanzi
Khange ndikwazi ukugqibezela Uhlalutyo ngaphandle kokuvavanya ukumelana namanzi. Ibiya kuba nemibala ngakumbi ngevidiyo, kodwa masihambe ngaphandle kweengxaki. Ndingene emanzini imizuzu eliqela kwaye yonke into iyaqhubeka nokusebenza ngokugqibeleleyo.
Udibana Ukucaciswa kwe-IP8X oko kuthetha ukuba yimizuzu engama-60 kubunzulu ukuya kuthi ga kwi-2 m.
Ndiyifumene ukuba yayisitya kakhulu. Amava ebelunge kakhulu. Ukusebenza okungamanzi kakhulu ukuqala, ukujika kwephepha, ukukhangela, ukubhala ngamanqaku, njl njl. Izibane nazo zibalasele kwaye ukusetyenziswa kuhle kakhulu, nje ukuba uyichukumise kamsinya uqhela kwiimenyu zeKobo.
Ndikuthanda ngokwam ukudityaniswa kwePokotho nangona inokwenza uphuculo oluncinci njengoko benditshilo. Nangona uKobo eneevenkile yakhe yokuthengisa ii-ebook, ayinamandla njengokudityaniswa kweAmazon kunye nohlobo lwayo kunye nekhathalogu yayo.
Kwinqanaba lebhetri, ukusebenza okuqhelekileyo, iiveki ezininzi ekungafuneki ukuba sikhathazeke.
Ekuphela kwento endicinga ukuba kufuneka siyigcine engqondweni kukuba sisixhobo esikhulu. Ayisiyonto ilungileyo ukuyithutha yonke imihla okanye ukufunda ebhedini. Kodwa apha kuxhomekeke kunambitheka nganye nganye.
Unako yithenge apha.
IKobo Aura Ifoto enye yegalari
Zonke iifoto kwigalari zithathiwe kwiholo yaseRoma eSagunto kwaye umsebenzi okwikhava yile Weaver ngu-Nina Allan ehlelwe yindlu yokupapasha iFata Libelli engasasebenziyo. Olu hlengahlengiso lwanamhlanje lwentsomi ka-Arachne. Yonwabele!
UKobo Aura One
Ubungakanani ukuba uthanda abafundi abakhulu kakhulu
Ukukhanyisa kunye nokubonisa
Ukusebenziseka kakuhle kakhulu
Ukuba awubathandi abafundayo abakhulu ayisiyakho le
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » UKobo Aura Uvavanyo olunye
Enkosi ngombono wakho uNacho. Ndine-Kindle Oasis entsha yenyanga kwaye kwabonakala kumangalisa. Kuyamangalisa ukuba zingakanani ii-intshi ezongezelelweyo zibonisa xa kuthelekiswa ne-6 ″… kwaye le inkulu kakhulu.
Ngokwam, kwaye ngaphandle kokuzama i-Kobo, ndingakhetha i-Oasis kuba ndihlala ndifunda ndilele kwaye i-ergonomics yohlobo luyabonakala ilungile kuyo. Ukuba, umba wokukhanya ngemibala ethambileyo ubonakala ngathi yimpumelelo endicinga ukuba iAmazon ithatha ixesha ukuyikopa.
Imibuzo embalwa ukuba awukhathali:
- Ngaba inkqubo yokugcina ifana nohlobo? Ngamanye amagama, ngaba isekwe kwi "ingqokelela" okanye ungabeka iifolda ngokuthe ngqo kwi-pc ngokungathi yimemori ye-usb?
- Njani ngezichazi-magama? Sele unayo indibaniselwano enye? IsiNgesi iSpanish?
- Ngaba kunokwenzeka ukubeka iincwadi ezithengiweyo kwiAmazon okanye ukusebenzisa i-Kindle Unlimited okanye i-Kindle Prime ekhutshwe kutshanje? Andiqondi okanye ubuncinci ngokulula kodwa nje ukubuza ...
Molo Molo. Ndiyaphendula.
-Ingqokelela inokwenziwa kwiincwadi zeqela esinazo kwisixhobo. yenziwe kwiimenyu zabo. Ungalayisha iifolda okanye iifayile ngokuthe ngqo kwi-ereder evela kwi-PC, iyaqonda ukuba iincwadi kodwa hayi ulawulo oluphezulu, oko kukuthi, ukuba ubeka iifolda ezi-2 ezineencwadi ezi-4 inye, uya kubona iincwadi ezi-8 kwaye ukuba ufuna uku-odola unayo ukuzenza kwimenyu yengqokelela.
-Zisa izichazi-magama kunye nomguquleli, ndenze iSpanish, isiNgesi kunye neSpanish-IsiNgesi kwaye kukho ukhetho lweelwimi ezininzi kwimenyu yoqwalaselo
-Ewe, ungabeka iincwadi kwiAmazon, uzikhuphele kwaye zikwi -azw3 uzifake kwi-calibre kwaye uzidlulisele kwi-kobo kwaye iyiguqulela ngqo kwi-.ub, sihamba ngokufanayo xa une-epub kwaye ufuna ukuyifaka kwi-kindle. Ewe, i-azw3 ayizifundanga ngokuthe ngqo Kwaye umxholo wohlobo olungenamkhawulo kunye ne-prime andikhange ndiyijonge kodwa ndicinga ukuba ayinakwenziwa, hayi ngokuthe ngqo, mhlawumbi ukuba bayakuvumela ukuba ukhuphele iincwadi ungenza okufanayo, kodwa andazi.
Nantoni na ondibuza yona ndisenayo ukuyijonga kwaye ndiyibonise
Inyani yile yokuba andisoze ndayiqonda ifilosofi yohlobo noAmazon ukuba ndingazivumeli izixhobo zabo ukuba zisebenze njengeenkumbulo ze-USB kunye neefolda ezinokutsalwa zivele kwi-pc. Ndiyenzile le yam endala iPapyre 5.1 kwaye yayiyeyona ndlela ilungileyo kunye neyona ilungileyo ngaphandle kwamathandabuzo.
Ngokuqinisekileyo kukho isizathu esihle ... kodwa andazi.
Enkosi ngokujonga kwakhona, inomdla kakhulu kwaye yenziwe kakuhle. Umbuzo omnye kodwa: "Nangona uKobo eneevenkile yakhe yokuthengisa ii-ebook, ayinamandla njengokudityaniswa kweAmazon kunye nohlobo lwayo kunye nekhathalogu yayo"
Ithetha ntoni le nto ? Ukuba andiphazami, uKobo uneencwadi ezingaphezu kwezigidi ezi-6 kwaye iAmazon ayikaze ibhengeze ngaphezulu. Inyaniso?
Ngendlela, kubonakala kum ngathi yomelele ukuba kukho intetho yexabiso eligqithisileyo xa oku kungazange kutshiwo nge-Oasis, ebiza kakhulu! Ndiyathemba ukuba ayisiyorhwebo kwaye ke ayisiyiyo injongo.
Ngelishwa ayisiyiyo yonke into elininzi leencwadi. Ngokubhekisele "kwiinkqubo zendalo", iAmazon inamandla ngakumbi. Uninzi lwabantu lukhetha ukuba nobushushu ngenxa yobuninzi bezibonelelo, iincwadi ezizipapashayo, njl njl. Banayo i-Kindle Unlimited, ireyithi ethe tyaba yokufunda iincwadi kunye ne-Kindle Prime esandula ukumiliselwa ekubolekisa ngeencwadi zasimahla ukuba uyiNkulumbuso yenkonzo yabo. Ngale ndlela, andiboni ukuba nayiphi na inkampani inokuhlangabezana nayo.
Kwelinye icala. Ndithetha nge-ereader ebiza kakhulu, kuba i-229 ye-ereader yimali eninzi ngaphandle kokuyithelekisa nayo nayiphi na inkampani. Kukho abanye abafundi ngaphakathi kweKobo abiza kakhulu, njengeKobo Clara HD abayikhupha ngoJuni 5. Ukuba andithethi ngexabiso le-Oasis kungenxa yokuba kukuphononongwa kweAura One.Kwiveki ezimbalwa ezizayo kuya kubakho uhlalutyo lweOasis entsha nindala kwaye uya kubona ukuba uluvo lwam malunga nexabiso kukuba iphezulu. Nangona esi sele sisigqibo somntu ngamnye.
Ewe, ayizizo izithuba zorhwebo. Zizohlalutyo okanye uphononongo, iimveliso zishiya iimveliso zazo ukuze sikwazi ukuthetha ngazo ngokukhululekileyo. Kwaye yile nto siyenzayo. Kucacile ukuba yinto ehambelana nomxholo. Kungenxa yoko le nto luphononongo.
I-eReader ebalaseleyo, iinyanga ezininzi zokuba nayo (ngaphezulu kweencwadi ezi-7 ezifundwayo) kwaye iyahamba kakuhle. Yonke into elungileyo abayithethayo ngaye iyinyani.
Sukuvumela ubungakanani ukuba bukoyike, ngenxa yokuba ukophuka kwephepha kuyaqwalaselwa, ukuba awunazandla zincinci, kuya kufuneka ukuba ufunde ngokunye.
Kwaye ayisiyiyo i-232gr. (zithini ubunzima bam) zezona zinto zilungileyo.
Njengoko ndithanda ukufunda xa ndisitya ndedwa (okanye ngekofu) kwaye kuba sisixhobo sam "esomeleleyo" sokushiya indlu, ndongeze enye yezo "origami" zigubungela ukuba, ukongeza ekunikezeleni ukhuseleko, vumela kukuma wedwa, ewe dibanisa i-116gr. ubunzima obongezelelweyo.
Ngokubhekisele kwi-ecosystem ... oko, kwisininzi; kuhle ukukhetha.
Ingxaki ekuphela kwayo ekufuneka iqatshelwe: Xa ushiya izikrini ezi-6 is kunzima ukubuyela kuzo.
Molo, ndineKobo Aura One kwaye kuba bendingacacanga ncam malunga nendlela ezilayishwa ngayo iincwadi (bendinepapyre ngaphambili) ndizilayishe ngokuthe ngqo. Kodwa andazi ukuba kwenzeka ntoni xa ndifuna ukubona amaqweqwe okukhetha incwadi ... emva kwamaphepha amathathu ndivalekile. Ndifundile ngokufaka iincwadi ngeCaliber.Ngaba ungandicacisela inyathelo ngenyathelo ukuba ndenze njani? Enkosi!!!
Ufakela uCaliber (https://calibre-ebook.com/)
Xa uyiqhuba okokuqala okanye kamva kwi "Ukukhetha> Sebenzisa iWizard yokwamkela", ubonakalisa ukuba uya kusebenzisa i Kobo Aura
Funda incwadana ukuba unako okanye uye kuyo https://calibre-ebook.com/help
Beka iincwadi zakho, uya kuzilungiselela.
Ngokusebenza kweCaliber, kwaye sele unencwadi (okanye), uqhagamshela i-Kobo yakho (ihlawulisiwe, ivuliwe, kwiscreen sasekhaya) nge-USB kwiPC.
I-Kobo kufuneka ithi "Ikhompyuter ifunyenwe" cofa [Qhagamshela] kwaye izakuthi "Idityanisiwe kwaye iyashaja"
Kwi-PC, ifolda yengcambu yeKobo kufuneka ivulwe kwaye kwiCaliber ikholamu "Kwisixhobo" kunye neempawu ezimbalwa "Thumela kwisixhobo" kunye ne "Icebo" kufuneka zongezwe.
Khetha incwadi, cofa i icon «Thumela kwisixhobo», phinda iincwadi ozifunayo
Ukuba ucinezela i "Icebo" icon, kuya kufuneka kubonakale iincwadi ozigqithisileyo. Bambelela ngasekunene kwelo icon kukho utolo olusezantsi oluncinci, xa ucinezela kukunika ithuba lokukhetha "Ukukhubaza isixhobo", cinezela ukwenza njalo.
I-Kobo kufuneka ibuyele kwangoko kwiscreen esikhulu, ikhuphe i-USB.
Kungamthatha ithutyana ukuba ahlaziye umfundi (ubuninzi kwimizuzu emi-2 ngencwadi), myeke kwaye ayenze.
Ngoku kuya kufuneka ukwazi ukufunda iincwadi zakho.
Lumka, amaqweqwe angabonakali kakuhle anokubangelwa kukungaziphathi kakuhle iincwadi, ukuba ingxaki iyaqhubeka, yiya kuyo https://www.epublibre.org/ khuphela i-ePub kwaye ujonge, ukuba akunjalo, ndixelele apha.
Molo, apha sithetha ngeCaliber https://www.todoereaders.com/calibre-portable.html
UOmar El Kadri sitsho
Molo Nacho, inqaku lakho libe luncedo kakhulu kum. Kodwa ndikhangela umntu ofundayo okwaziyo ukufunda iPDF kakuhle. Ndiyakubuza, ngaba iAura One ilungele ukufundwa ngePDF? Ukuba akunjalo, yeyiphi ereader ebonakala njengeyona ifanelekileyo yokufunda kwiPDF. Ukusuka sele enkosi kakhulu. Omar
Phendula uOmar El Kadri
Molo Omar. Ngelishwa khange ndivavanye namphi umfundi ophatha i-pdf kakuhle. Ewe zinokufundwa kodwa njengoko uxwebhu lungalinganiyo kubungakanani bekhusi uhlala usenza izinto ezingaqhelekanga kwaye lundenza ndibenovalo. I-Aura One inelungelo lobungakanani bescreen, kodwa okwangoku andizukuyicebisa ukuba ifunde i-pdf, nokuba ngabafundi abane-Android kunye nababukeli abohlukeneyo ndifumene amava amnandi
Kwimagazini, amaphepha kunye nenye i-pdf endiyifundileyo, engezizo iincwadi, ndisebenzisa ithebhulethi. Kwaye iincwadi okanye ndiye kwifomathi ebonakalayo okanye i-epub, mobi njl njl, ifomathi yedijithali.
UKobo Clara HD, iReader eya kuqala ukuthengiswa ngoJuni 5